tolotra Banggood tsara indrindra amin'ny volana martsa 2017 | Vaovao momba ny gadget
Banggood Izy io dia iray amin'ireo magazay sinoa malaza indrindra manana mpanjifa betsaka indrindra manerantany. Izany rehetra izany dia mitranga amin'ny ampahany betsaka noho ny tolotra mahaliana sy ny fihenam-bidy mahaliana izay matetika atolotray antsika indraindray. Androany, tsy mandeha lavitra intsony izahay, dia mitondra andian-fitaovana azonao raisina amin'ny vidiny mahagaga. ary izany dia hamonjy anao euro vitsivitsy.
Raha te-hanome fanomezana ianao na mividy zavatra hanaovana fanomezana dia vakio hatrany ary araraoty ny fampiroboroboana izay nomanin'i Banggood ho antsika rehetra ary eny, tsy haharitra ela izy ireo.
2 Xiaomi Mi Note 2 Global Version
5 IMars Gadgets
9 Junsun HD Car DVR Camera
10 Mpandahateny BlitzWolf F1
Xiaomi dia tsy mitsahatra ny manaitra antsika sy ity Xiaomi Scooter M365 Iray amin'ireo famoahana farany azy ireo teny an-tsena, izay azonao vidiana miaraka amin'ny fihenam-bidy 100 dolara.
Azonao atao ny mividy an'ity Xiaomi Scooter M365 ity amin'ny vidiny mahavariana HERE ary mampiasa ny kaody f98b76
El Xiaomi Mi Fanamarihana 2 Izy io dia iray amin'ireo finday avo lenta finday tsara indrindra izay hitantsika ankehitriny, ary azontsika atao izao amin'ny vidiny tena mahaliana. Mahaliana ihany koa ny mitadidy ao an-tsaina fa hahazo ny dikan-teny matanjaka indrindra amin'ireo rehetra misy izahay ary manana RAM 6GB sy fitehirizana anatiny 128GB.
Efijery OLED 5,7-inch miaraka amin'ny vahaolana FullHD
128GB fitehirizana anatiny UFS 2.0 fitadidiana anatiny
Fakan-tsary mihetsika 318 megapixel Sony IMX23 misy fakan-tsary miorina miaraka amin'ny f / 2.0
Fifandraisana; NFC, feo HiFi 24 bit
Batterie 4.070 mAh batterie Quick Charge 3.0
Hita amin'ny loko 2: piano mainty sy volafotsy glacier
Azonao atao ny mividy azy HERE miaraka amin'ny fihenam-bidy 77.99 dolara ary mampiasa ny kaody note2global
Raha toa lafo loatra ny Xiaomi Mi Note 2 dia afaka misafidy an'io foana ianao LeTV LeEco Le Max 2 X829 izay iray amin'ireo fitaovana finday be mpividy indrindra ao Shina, angamba noho ny famolavolana azy tsara na angamba noho ny azy RAM 6GB ary 128GB fitehirizana anatiny ahafahanao mitahiry ny angon-drakitrao sy ny sary rehetra.
Vidio ity LeTV LeEco Le Max 2 X829 HERE miaraka amin'ny vidin'ny tantara ratsy amin'ny kaody x829pro
Manohy ny tolotra finday avo lenta izahay ary mahita an'io Lenovo-ZUK Z2 Pro, izay azontsika lazaina fa tena biby miaraka aminy 6GB an'ny RAM ary ny vidiny mirary mihoatra ny faniriana ambanin'ny 300 euro.
Raha te hankafy ity terminal Lenovo ity ianao dia afaka mividy azy HERE mampiasa ny kaody z2pro ary raiso ao anatin'ny andro vitsivitsy ao an-tranonao.
iMars dia iray amin'ireo marika malaza amin'ny tsenan'ny teknolojia, noho ireo gadget manara-penitra ary manana vidiny mahaliana ihany koa. Ankoatr'izay, Banggood dia manolotra fihenam-bidy 15% amin'ny vokatra rehetra ao aminy.
Raha mahita ny katalaogin'ny fitaovana atolotra dia azonao atao ny mahita azy ireo HERE ary raha mampiasa ny kaody 15% iMars ianao dia hahazo tombony amin'ny fihenam-bidy mahaliana.
Ny "lamaody" an'ny 6GB RAM dia tena hita eo amin'ny tsenan'ny finday, ary UMI Plus E. Iray amin'ireo smarthpones maro hafa izay manana an'io endri-javatra io sy ny maro hafa, samy mahaliana kokoa.
Raha te hahazo ny UMI Plus E miaraka amina fihenam-bidy mahaliana ianao dia ataovy izany HERE mampiasa kaody BGPLUSE
Ny fitaovana finday farany avy any Xiaomi no Redmi Note 4, izay an'arivony maro ny singa efa amidy erak'izao tontolo izao. Ankehitriny i Banggood dia manolotra izany ho antsika miaraka amin'ny fihenam-bidy mahaliana 30 dolara. Ity no fanontana sinoa, zavatra izay tsy maintsy raisinao amin'ny fotoana rehetra.
Raha te hanana azy io dia mila miditra fotsiny HERE ary ampiasao ny kaody note464
Raha te hisoroka olana ianao, dia azonao atao ny mividy ilay Xiaomi Redmi Note 4 amin'ny fanontana manerantany, izay misy fihenam-bidy ihany koa, na dia amin'ity tranga ity aza latsaky ny fanontana hitantsika teo aloha.
Vidio ny Xiaomi Redmi Note 4 Global Edition HERE mampiasa ny kaody n4global
Junsun HD Car DVR Camera
Una fakantsary ao anaty fiaranao Mety hahasoa indrindra amin'ny toe-javatra maro be izy io, ary vao mainka aza raha afaka mividy azy io amin'ny vidiny tena mahaliana isika ary raha mamela ny karama amin'ny volana manaraka isika.
Raha te-hisehoseho amin'ny namanao ianao ary hampiasa azy io amin'ny fotoana maro dia azonao atao ny mividy an'io Junsun HD Car DVR Camera HERE miaraka amin'ny vidin'ny skandika raha mampiasa kaody 9b2020 ianao
Mpandahateny BlitzWolf F1
Raha hikatona ity lisitra ity dia tsy afaka nanohitra ny fampisehoana aminao izany mpandahateny azo entina, miaraka amina endrika mahaliana sy mitandrina indrindra, ary ankehitriny atolotra amin'ny vidiny mandondona izay mametraka azy eo ambony miaraka amin'ireo fitaovana tsara indrindra amin'ny karazany sy ny kalitaony.
Afaka mahazo HERE Ity mpandahateny BlitzWolf F1 ity dia mampiasa kaody 7fc3a8 hahazoana izany amin'ny vidiny tsy hita lany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ny tolotra Banggood tsara indrindra amin'ny volana martsa 2017
Ny emojiis vaovao dia azo jerena ao amin'ny tranonkalan'ny Emojipedia